Inkxaso kunye neNkonzo - Shandong Kingoro Machinery Co., Ltd.
Phendula imibuzo yabathengi kwaye wazise iimveliso kunye neenkonzo
Sineqela loyilo lobuchwephesha kwaye sele siyile iiprojekthi ezininzi ezinempumelelo zepellet kwihlabathi liphela. Siza kuyila iiprojekthi ezizezona zilungileyo ngokuhambelana neemfuno zabaxhasi, izinto ezingavuthiweyo, umzi-mveliso, uhlahlo-lwabiwo mali ngokunzulu.
Sayina isivumelwano seNkonzo zeMveliso, esiveliswe ngesicelo, sinokwenziwa ngokwezifiso.
Iimpahla zipakishwe kwaye zipakishwe kwizikhongozeli zisiwe kwizibuko.
Sinikezela ngofakelo lwesiza, ukulungisa ingxaki kunye nenkonzo yoqeqesho kwihlabathi liphela
I-imeyile engama-24 * 7h, uNxibelelwano ngeFowuni ｏｒ Ukujonga indawo, sombulula iingxaki zakho kwakamsinya
Ndwendwela indawo yabathengi, ujonge izinto ezingavuthi kwaye uncede abathengi ukuba bacwangcise izityalo ezifanelekileyo.
Ukuphuculwa kwetekhnoloji kunye noBuchule
Isebe lethu le-R & D linxibelelana rhoqo nesebe lezentengiso nasemva kwentengiso, ukuqokelela imibuzo eyona nto ixhalatyelwe ngumthengi, ukuphucula nokwenza izixhobo ngokufanelekileyo.
Sinobuchule beSebe le-QC ukulawula ngokungqongqo umgangatho wazo zonke iinkcukacha kwinkqubo yemveliso, kubandakanya ukuthengwa kwemveliso eluhlaza, ulawulo lwemveliso, zonke izinto ezizodwa, iindawo zomatshini kunye nokuhanjiswa.
Uvavanyo lwempahla ekrwada yasimahla, sinokwenza uvavanyo lwasimahla lwempahla ekrwada kuwe.Kufuna nje ukuba uthumele imathiriyeli yakho eluhlaza kuthi, kwaye siya kufumana eyona ndlela yokwenza iipellets ngayo.
Ukutya kwezilwanyana iPellet Mill, Isityumzi somthi, IBelt eqhutywa ngeHammer Mill, Ukusila Machine For Wood, I-Garden Wood Chippers, I-Hammer Mill enenkanyamba,